अर्घाखाँचीमा वातावरण संरक्षण गर्छु भनेर चुनावी नारा बोकेका मेयर कमल भुसालले नरपानि डाँडोलाई मरुभूमि बनाउँदै अर्घाखाँचीबुलेटिन
अर्घाखाँचीमा वातावरण संरक्षण गर्छु भनेर चुनावी नारा बोकेका मेयर कमल भुसालले नरपानि डाँडोलाई मरुभूमि बनाउँदै
| २०७८ पौष १५ गते २०: ३७ मा प्रकाशित
गुरुदेव खनाल। सन्धिखर्क। तस्बिरमा दिइएको स्थानीय चुनावको समयमा सन्धिखर्क नगरपालिका का मेयर कमल प्रसाद भुसालले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ प्रमुख एजेन्डा बनाउनु भएको थियो । उक्त एजेन्डा बोकेर जनताको घरदैलोमा पनि पुग्नु भयो । र उहाँको एजेन्डालाई साथ र समर्थन पनि गरे र नगरपालिकाको प्रथम मेयर पनि बनाए । तर सत्तामा पुगी सकेपछि जनता सङ्ग गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरु डसविनका........... मा सिमित रहे ।
सन्धिखर्क न.पा. वडा न. ७ अहिले यसरी कृत्रिम मरुभूमिमा परिणत हुँदा मेयर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस विषयमा मौन रहनु आफ्नो बाचा र अभिव्यक्ति प्रति नै अन्याय गर्नु हो । मेयर कमल भुसालको कार्यकालमा जिल्लाकै प्रतिष्ठीत पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्रमा यसरी प्राकृतिक र पर्यावरणको दोहन गराइ यस क्षेत्रको हरियाली र सिमसार क्षेत्रलाई मरुभूमिमा परिणत गराउन प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुनुभयो । यसरी अव्यवस्थित रुपमा चुनढुङ्गा उत्खनन हुँदा स्थानीयस्तर र समग्र जिल्लामा नै तत्कालीन र दीर्घकालीन असरहरु देखिदै गएका छन ।
नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो चुनावी कार्यकाल पूरा हुँदा सम्म पनि यस चुनढुङ्गा विषयमा मुख खोलेको छैन । जब जनप्रतिनिधि जनताका सेवक भन्दा दलाल र माफियाका चाकडी बन्दछ्न तब वास्तविक लोकतन्त्र प्रति दया लाग्दछ । यतिबेला मेयर कमल भुसाल काङ्ग्रेसको कोटाबाट चुनाब लडनु भएको थियो । अहिले केन्द्रमा सरकार समेत काङ्ग्रेसको छ । यो सरकारले समेत वातावरण सम्बन्धमा निति, नियम घोषण गरेको पनि छ ।
मेयर ज्यु तपाईले आफ्नो चुनावी बाचा र घोषणा पत्र हेरेर तपाईंलाई कतै हीनताबोध हुँदैन । तपाईले जनतालाई यस विषयमा उत्तर दिनै पर्छ । चुनाव नजिकैदै छ । जनता मुर्ख छैनन् । तपाईले समयमा कदम चाल्नु भएन भने जनता तपाईबाट हिसाब खोज्ने छ्न। पर्यावरण जस्तो संवेदनशील विषयमा केही सिमित स्वार्थले गर्दा यस क्षेत्रका अमुल्य ऐतिहासिक तथा अमुल्य पुरातात्त्विक वस्तुहरु ओझेल पर्ने सम्भावना छ । यो समस्या प्रत्यक्ष नागरिक सङ्गै यस क्षेत्रको वनजङ्गल , पशुपंछीको पनि हो ।
हरियाली डाडालाई कौडीको भाउमा फ्रुसो र मरुभूमि बनाएर भविष्यमा यस क्षेत्रमा पर्ने समस्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? कुनै पनि संरचनाको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी कसरी बिकास गर्न सकिन्छ र ? आज विश्व जगत नै पर्यावरणीय संकटबाट ग्रुजिरहेको अवस्थामा हामी समयमै सचेत बन्न जरुरी छ ।यस क्षेत्र धरातलीय हिसाबले पानीको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो । यसरी पानीको संचय र भण्डार गर्न सक्ने क्षेत्रलाई नाम, निसाना मेटाउने गरि उत्खनन हुँदा सम्पुर्ण क्षेत्रले यस विषयप्रति आवाज उठाउन जरुरी छ ।
जिल्लाको एकमात्र प्रमुख गोरुसिङ्गे - सन्धिखर्क सडकको क्षमता भन्दा अधिक मालबाहक गर्दा सडकको दुराचार अवस्था छ । समग्रमा समाज र राष्ट्र उक्त उत्खननबाट दोहोरो मार र घाटामा छ ।
देश संघियतामा गएपछि स्थानीय सरकारलाई पुर्ण अधिकार दिएको छ । तर सन्धिखर्क नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार जनतालाई त्रास र सास्ती दिने भन्दा अन्य कार्यमा उपयोग गरेको देखिदैन । यहि छिमेकी जिल्ला दाङ्गमा स्थानीय बंगलाचुली गाउपालिकाले त्यस क्षेत्रमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य रोकेको छ । तर हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकालाई कसले रोकेको छ? जनता ठुलो कि उद्योग ? अब न जाग्नुहोस मेयर ज्यु अबेर भइ सक्यो । घाम झुल्कीसक्यो सिरक ओडेर अध्यारो छ , नभन्नुहोस ।